Udade waqhubeka nokuxoxisana nami: “UNkulunkulu akakwazi ukumelana nokubuka abantu beqhubeka nokonakaliswa kanye nokulinyazwa uSathane. Waphinde waba sesimweni somuntu futhi, waphila phakathi kwabantu futhi ezobonakalisa iqiniso ukuze asisindise ekonakaleni kwethu. Inqobo nje uma silalela uNkulunkulu futhi siqonda iqiniso elisezwini likaNkulunkulu, sizokwazi ukuhlukanisa kanye nokubona ngokucacile wonke amasu kanye nezindlela uSathane onakalisa ngazo umuntu. Sizokwazi ukubona ukukhohlakala koqobo lukaSathane futhi sibe namandla okulahla uSathane, silahle ukulinyazwa uSathane, sibuyele phambi kukaNkulunkulu, sithole ukusindiswa uNkulunkulu bese ekugcineni, silethwe uNkulunkulu esiphethweni esihle.” Lapho ngizwa ukuthi uNkulunkulu wayeze mathupha ukuzosindisa abantu, ngaba nomunyu kakhulu. Njengoba ngangingasafuni ukuthi uSathane aqhubeke nokungilimaza, ngatshela odadewethu mayelana nobuhlungu kanye nokungabaza kwami: “Angiqondi. Kungani ngizwa ubuhlungu obungaka ekufuneni ukuba ngcono kunawo wonke umuntu? Kungenzeka yini ukuthi nalokhu kubangelwe uSathane?” Odade bangifundela amanye amazwi kaNkulunkulu: “Konke umuntu omkhulu noma odumile akulandelayo empilweni—bonke abantu, eqinisweni—kuhlobene nala magama kuphela: ‘udumo’ kanye ‘nenzuzo.’ Abantu bacabanga ukuthi uma sebenodumo nenzuzo, bangasebenzisa lezi zinto ukuze bathole izikhundla eziphakeme nengcebo enkulu, futhi bathokozele impilo. Bacabanga ukuthi udumo nenzuzo kuwuhlobo lwemali abangayisebenzisa ukuze bathole impilo yokufuna intokozo nokujabulisa inyama okungenakuzithiba. Ukuze bathole udumo nenzuzo abayifisayo, abantu bayavuma, nakuba bengazi, ukuthatha imizimba yabo, imiqondo, konke abanakho, ikusasa labo kanye neziphetho zabo bakunike uSathane. Bakwenza lokhu ngaphandle ngisho kokuzindela okuncane, bengenalo nhlobo ulwazi mayelana nesidingo sokubuyiselwa konke abakunika uSathane. Ingabe abantu basengakwazi ukuzilawula uma becasha kuSathane futhi baze bathembeke kuye ngale ndlela? Abasoze. Sebelawulwa nguSathane ngokuphelele. Sebecwile ngokuphelele obhukwini futhi abakwazi ukuzikhipha…. Ngakho, uSathane usebenzisa udumo nenzuzo ukulawula imicabango yomuntu kuze kuthi konke angakucabanga kube wudumo nenzuzo. Umuntu ulwela udumo nenzuzo, wehlelwa ubunzima ngenxa yodumo nenzuzo, ubekezelela ukululazeka ngenxa yodumo nenzuzo, unikela konke anakho ngenxa yodumo nenzuzo, futhi angenza noma kuphi ukwahlulela noma isinqumo ngenxa yodumo nenzuzo. Ngale ndlela, uSathane ubopha abantu ngamaketanga angabonakali, futhi abanawo amandla noma isibindi sokuwalahla. Ngokungazi, bathwala la maketanga bese bedavuza beya phambili ngobunzima obukhulu” (“UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele VI” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ukuvela kwezwi likaNkulunkulu kungenze ukuthi ngibe nenhlansana yokuqonda. Bengiyisibonelo esiqavile somuntu obenziwe isigqila nguSathane, umuntu obezishabalalisa ngokufuna udumo kanye nenzuzo. Ngalahlekelwa uqobo lwami ekuphokopheleni ukuba ngcono kunabanye kanye nokuthola imali eningi ukuze abanye bafise ukuba yimi. Empeleni ngase ngiphenduke umshini owenza imali. Ngenxa yodumo kanye nengcebo ngase nginikele ngempilo yami uqobo. Impela ngangiyisigqila sodumo kanye nenzuzo. Lokhu kubangelwa indlela impilo ebukeka ngayo ngokuphathelene nokuthola imali eningi kanye nokuba abanye bafise ukuba nguwe, ngakuthola kunzima ukuzuza lokho engangikuphokophele kwaze kwaba sekutheni umzimba wami uthi kwanele. Lokhu kufisa udumo kanye nenzuzo kungibangele ubuhlungu obukhulu emzimbeni kanye nasemoyeni. Ukube bekungekona ukwembulelwa ngamazwi kaNkulunkulu uSomandla, bengingeke ngazi ukuthi izinto ebengizifuna bezingafanele. Empeleni, bekungenye yendlela kaSathane yokulimaza umuntu.
Kancane kancane, njengoba labo dade babevamise ukungivakashela bese bexoxa nami ngamazwi kaNkulunkulu uSomandla, ngaya ngokuwuvuma umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla. Ngesikhathi esifanayo, ngaba ngcono ekuhlukaniseni izindlela uSathane alimaza ngazo umuntu. Ngalesi sikhathi, ngaqaphela isimo somunye wozakwethu besifazane. Ukuze bathole imali, yena kanye nomyeni wakhe beza eJapan ukuze bazosebenza. Noma-ke bobabili babethole imali, umyeni wakhe waqala ukuba nobunzima emzimbeni. Kwakungekho ayengakwenza kwakumele abuyele ekhaya ukuze elashwe. Umphumela walokho waba ukuthi wayetholakele ukuthi unomdlavuza wesigaba sokugcina. Ngemva kokuthi sebetholile ngalokhu, babengasafuni ukubuyela eJapan bazothola imali. Umndeni wonke wawuphila ngokwesaba kanye nokudabuka. UNkulunkulu uSomandla wathi: “Abantu bachitha ukuphila kwabo bejaha imali nodumo; babambelela kulezi zinto, becabanga ukuthi ziwukuphela kwendlela yokuziphilisa, njengokungathi uma benazo bazoqhubeka bephila, ziyobasindisa ekufeni. Kodwa kulapho sebezoshona khona kuphela lapho babona khona ukuthi lezi zinto ziqhelelene kangakanani nabo, babuthaka kangakanani ekufeni, batatazela kalula kangakanani, banomzwangedwa futhi badinga usizo kangakanani, bengenandawo abangaphendukela kuyo. Baqaphela ukuthi ukuphila ngeke kuthengwe ngemali noma ngodumo, ukuthi akunandaba ukuthi umuntu ucebe kangakanani, akunandaba ukuthi waziwa kangakanani noma ukuthi unasiphi isikhundla, bonke abantu bayahlupheka futhi abalutho ekufeni. Bayabona ukuthi imali ngeke ikuthenge ukuphila, ukuthi udumo ngeke lucime ukufa, ukuthi akukho lutho phakathi kwemali nodumo okungelula isikhathi sokuphila, ngisho ngomzuzwana nje” (“UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ishwa elehlela uzakwethu langenza ukuthi ngibone nakakhulu ukuthi impilo iyigugu ngempela. Ngesikhathi esifanayo bengibona indlela uSathane abesebenzisa ngayo “udumo” kanye “nenzuzo” ukulimaza izimpilo zabantu abaningi. Ngalesi sikhathi, ngazizwa nginenhlanhla ngendlela eyisimangaliso ngokuthi ngangikwazi ukwamukela umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina. Uma ngangingafundi izwi likaNkulunkulu uSomandla, ngabe angizange ngikwazi ukubona iqiniso lokuthi uSathane umlimaza kanjani umuntu. Kungekudala, ngabe ngagwinywa uSathane ngiphila.
Ninganakile, ngangiya ngokuba ngcono. Ngemva kokuzwa ubuhlungu kanye neminjunju yalokhu kugula, ngangibuka indlela engangingaphansi kokulawulwa ngayo ngenxa yendlela engeyiyo uSathane abeka ngayo impilo “ngizama ukuba ngcono kunawo wonke umuntu.” Sonke lesikhathi, bengifuna ukugqama kozakwethu nokuphila impilo yenala ukuze abanye abantu bangihalele nokuthi bafise ukuba yimi. Nokho, angizange ngicabange ukuthi kunalokho engizokuthola kwakuwubuhlungu kanye nokudangala. Angizange ngithole nakancane ukuthula kanye nenjabulo. Sengiluzwile lolu hlobo lobuhlungu futhi angisafuni ukulwisana nalokho engidalelwe khona futhi angisazimisele ukufuna udumo kanye nenzuzo. Le akuyona impilo engiyifunayo. Angisewona umshini owenza imali osebenza ngesivinini esikhulu. Kunalokho, ngiphila impilo ejwayelekile zonke izinsuku. Ngaphandle kokuya emsebenzini, ngivamise ukuya emihlanganweni, ngifunda izwi likaNkulunkulu futhi ngabelana nalokho okwenzeka empilweni yami kanye nokuqonda kwami nobafowethu kanye nodadewethu. Ngifunda futhi nokucula amahubo ezwi likaNkulunkulu futhi ngihlala ngokuthokoza. Sengithole uhlobo lokuqiniseka kanye nokuthula engingakaze ngikuzwe phambilini enhliziyweni yami. Ngelinye ilanga ngafunda lesi sigaba esilandelayo samazwi kaNkulunkulu: “Lapho umuntu engenaye uNkulunkulu, lapho engakwazi ukumbona, lapho engabuboni ngokucacile ubukhosi bukaNkulunkulu, zonke izinsuku azisho lutho, azizuzisi futhi zibanga usizi. Kungakhathaleki ukuthi umuntu unjani, usebenzaphi, uphila kanjani, noma imigomo yakhe imenza aphukelwe inhliziyo futhi ahlupheke, lowo muntu ngeke akwazi ukubheka emuva. Kulapho kuphela emukela khona ubukhosi boMdali, lapho emukela ukuqondisa namalungiselelo Akhe, futhi efuna ukuphila kwangempela komuntu, lapho eyokhululeka khona kancane kancane ekuhluphekeni nasezinkathazweni zokuphila” (“UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Kusukela emazwini kaNkulunkulu, ngaqonda ukuthi incazelo yokuba khona komuntu kungukuphila ngamazwi kaNkulunkulu kanye nokuphila ngokuhambisana namazwi kaNkulunkulu kanye nokuthobela umthetho kanye nokuhlelwe uMdali. Lokhu kuyimpilo yomuntu eyiqiniso. Izinto umuntu angakwazi ukuzithola empilweni yakhe azincikile ekubeni kwakhe matasatasa kanye nasekusebenzeni kwakhe ngokukhwishiza. Kunalokho, kusekelwe emthethweni kaNkulunkulu kanye nasekugcotshweni uNkulunkulu phambilini. Ngesikhathi esifanayo, ngiyaqonda futhi ukuthi akunandaba ukuthi umuntu uthole umnotho ongakanani ngoba konke kuyizinto esinazo zasemhlabeni. Awuzanga nakho ngesikhathi uzalwa futhi awukwazi ukuhamba nakho ngemva kokushona. Ngemva kokuba sengibe nalokhu kuqonda, ngase ngizimisele ukuthobela umthetho kanye nokuhlela kukaNkulunkulu. Ngaba nengxenye yesibili yempilo yami engiyibeke kuNkulunkulu. Ngangingasafuni ukuba umuntu owayefuna ukuthi abanye bafise ukuba nguye. Kunalokho, ngafuna ukuba umuntu olalela uNkulunkulu. Manje, sengisebenza amahora amathathu ukuya kwamane ngosuku. Umphathi wami ungowokudabuka eJapan. Noma singakwazi ukuxhumana ngamazwi, umphathi wami uyanginakekela. Njalo uma engicela ukuthi ngenze okuthile, usebenzisa amagama alula ukuze adlulisele umyalezo wakhe kimi. Akangenzeli ingcindezi. Ngikuzwa nakakhulu manje ukuthi, inqobo nje uma umuntu elalela uNkulunkulu, uzokwazi ukuphila impilo enokuthula futhi enentokozo.
Okulandelayo: Ngathola Ukukhanya Kweqiniso